याैन शिक्षा स्वास्थ्य Archives - Saitim Khabar
याैन शिक्षा स्वास्थ्य
लामो समय यौन सम्पर्क नगर्दा मानिसमा हुने शारिरीक तथा मानसिक परिवर्तनबारे ६ ओटा उल्लेख ।
काठमाडौ / जुनसुकै कारण होस् तर हामी सबैका लागि एउटा यस्तो समय आउन सक्छ, जतिबेला हामी यौन सम्पर्क गर्न सक्दैनौं । यो विषय विवाहित र अविवाहित सबैका लागि लागू हुन्छ । विवाहित व्यक्ति पनि सधैं शारिरीक सम्पर्क गर्न सक्षम हुनसक्छन् भन्ने हुँदैन । तर, तपाईंले कहिल्यै ख्याल गर्नुभएको छ कि लामो समयसम्म यौन सम्पर्क नराख्द...
पूरुषलाई महिलाको कुन अंगले आकर्षित गर्छ ?
काठमाडौं / महिलाको आकर्षण संग जोडिएका विभिन्न अंगहरु जस्तै अनुहारको बनोट, शरीरको बनावट, रुपरंग संगै उनीहरुको छातिमा रहेको बाहिरी अंग स्तनले पनि पूरुषलाई आकर्षित गर्ने गर्दछ । प्राय विदेशी समाजमा महिलामा रहेको स्तनको विकसित रुप अर्थात ठूला स्तनलाई आकर्षक मानिन्छन् । विस्तारै नेपाली समाजले पनि विदेशी नक्...
विज्ञहरु भन्छन प्याजको सेवन गरे यौन क्षेत्रमा बृद्धि
काठमाडौ / प्याजको सेवन गर्न तपाई कति रुचाउनु हुन्छ ? वा सेवनमा धेरै भएको त छैन् ? वा त्यसको बास्ना मन पर्दैन ? वा सेवन गर्न उचित मान्नु हुन्न ? तर प्याजका धेरै उपयुक्तता मध्य एक हो यौन क्षेत्रमा बृद्धि । प्याजले केवल खानालाई मात्र स्वादयुक्त बनाउँदैन प्याजको भोजन अपच तथा खाना नरुच्ने जस्ता समस्याको समा...
https://youtu.be/MN1UxIOEgzI काठमाडौ / प्राय कुन उमेरको यौन सम्बन्ध बढी रोमान्चक र आनन्द दायक भन्ने बिषयमा धेरै बहसहरु हुने गर्दन् । सामान्यतया कुरकुरे बैँश अर्थात् किशोरावस्थाको समयमा मान्छे सेक्सको विषयमा सबैभन्दा धेरै उत्सुक हुन्छ र त्यस्तो कौतुहलताको उमेरमा गरिने सेक्समा उसले सबैभन्दा धेरै...
पहिलो पटकको यौन सम्पर्क तुलनात्मक रूपमा असुरक्षित हुनसक्छ ? हेर्नुहोस।
काठमाडौं / नेपालमा धेरै जसोले विवाह पछि मात्र यौन सम्पर्क स्थापित गर्छन् भन्ने कुरा विभिन्न अध्ययनबाट देखाएको छ । तथापि सहरीकरण, औद्योगिकी करण तथा उच्च शिक्षासँगै विवाहपूर्व यौन सम्बन्ध राख्ने घटना बढ्न थालेको छ । त्यसैले पहिलो यौन सम्पर्क र सुहागरात (मधुरात्रि) को यौन सम्पर्क अलिकति फरक छ । किशोर अवस्...
यौन शक्ति वढाउने औषधि कहँ पाइन्छ ?
काठमाडौ / सिनामंगल स्थित सडकमा कम चहलपहल थियो । मध्यान्हको घामका कारण मानिसहरु उतिसारो सडकमा थिएनन् । त्यही नजिकै रहेको एउटा औषधि पसलमा एक युवक पसलेसँग जोडतोडले कुरा गरिरहेका थिए । ‘जे पायो त्यहीं गफ दिने, ८ हजार तिरेको के काम’ उनी जङ्गिए । पसलले आफ्नो कुराम मनाउने प्रयास गरिरहेको थिए । ध्यान त्यतै केन्द्...
यौनशक्ति बढाउन घरेलु ५ उपाय यस्तो छ ।
काठमाडौ / यौन दुर्वलता धेरै मानिसका लागि पीडाको विषय बनेको छ । यो समस्या समाधान गर्न धेरै औषधिको प्रयोग गर्दा पनि समस्या समाधान हुँदैछ । जसले स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । यौनशक्ति बढाउन घरेलु उपाय नै लाभान्वित हुने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । अव्यवस्थित खानपान, तनावपूर्ण जीवन...
हस्तमैथुन गर्नुका सात फाइदाहरु यस्ता छन् थाह पाईराखौं !
काठमाडौं / हस्तमै थुनका बारेमा मानिसहरुको विभिन्न धारणा छ । कोही यसलाई अश्लील उत्तेजित व्यवहार ठान्छन् भने कोही यसलाई सही ठान्छन् । तर विज्ञानले भने हस्त मैथुनलाई गलत मान्दैन र यसलाई स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले राम्रो र सामान्य मान्छ । हस्त मैथुनको दौरानमा मानिस आफ्नो दिमागमा सुन्दर पलहरुको कल्पना गर्छ र त...